KMD Recent News
Date: 23 March 2015 (Mon - Fri)
Time: 07:00 AM to 11:30 AM
Place: ၃၃၁၊ ပြည်လမ်း၊ မြေနီကုန်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်။
University of Greenwich (UK) ၏ ဒုတိယနှစ် (Advanced Diploma) သင်တန်း (L5DC)
Date: 16 March 2015 (Mon - Fri)
KMD Computer Center တွင် NCC Department မှ 1st Year Computing အတန်းသစ်ကို ၂၃.၃.၂၀၁၅ (တင်္နလာနေ့) တွင် အတန်းသစ်ကို မြေနီကုန်း KMD တွင်ဖွင့်လှစ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
KMD Computer Center တွင် NCC Department မှ 2nd Year Computing အတန်းသစ်ကို ၁၆.၃.၂၀၁၅ (တင်္နလာနေ့) တွင် အတန်းသစ်ကို မြေနီကုန်း KMD တွင်ဖွင့်လှစ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
HOTLINE 700895 နှင့် 220555 သို့လဲ ဆက်သွယ်အပ်နှံနိုင်ပါသည်။
KMD Graduation Ceremony , at UMFCCI
Speech by Director Education & Arts from British Council
Speech by KMD President , at UMFCCI
B.Sc (Hons) BIT, 1st Class Graduate, Ma Yu Yu Maw
L5DC Global High Achiever 2014, Mg Aung Khant Thet Naing
L4DC Global High Achiever 2014, Ma Myo Myo Htun
L4DC Global High Achiever 2014, Mg Tu Tha Naing
B.Sc (Hons) BIT Graduate , at UMFCCI.
B.Sc (Hons) BIT Graduate , at UMFCCI
Graduation Ceremony , at UMFCCI
Graduation Ceremony , at UMFCCI.
၃၃၁ ၊ ပြည်လမ်း၊ မြေနီကုန်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်
၀၁-၅၀၂၂၃၃ ၊ ၅၂၇၄၃၆
HOTLINE : 09253969200 သို့ လဲ ဆက်သွယ်အပ်နှံနိုင်ပါသည်။
Place: ၁၇၄-၁၈၂၊ ပန်းဆိုးတန်း၊ ကျောက်တံတား မြို့နယ်။ 01-381035, 381129, 391286
Date: 06 March 2015 (Mon - Fri) Date: 13 March 2015 (Mon-Fri)
Time: 11:30 AM to 02:30 PM Time: 10:00 AM to 11:30 AM
Place: ၁၇၄-၁၈၂၊ ပန်းဆိုးတန်း၊ ကျောက်တံတား မြို့နယ်။ 01-381035, 381129, 391286 Place: ၁၇၄-၁၈၂၊ ပန်းဆိုးတန်း၊ ကျောက်တံတား မြို့နယ်။ 01-381035, 381129, 391286
UK အသိအမှတ်ပြု Scottish Qualification Association (SQA) မှ ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်သော SQA International Star Award 2014 ကို KMD Computer Centre မှ နိုင်ငံတကာဖြင့် ရင်ဘောင်တန်း၍ ရရှိ ။
KMD Computer Centre အနေဖြင့် နိုင်ငံတကာရှိ အဖွဲ့အစည်းများ ၊ သင်တန်းကျောင်းများ နှင့် ယှဉ်၍ UK အစိုးရအသိအမှတ်ပြု စကော့တလန် အရည်အချင်းစစ် အဖွဲ့အစည်း (SQA) မှ ဂုဏ်ပြု ချီးမြှင့်သော SQA International Star Award 2014 ဆုကို ဆွတ်ခူးရရှိကြောင်း သိရပါသည် ။ International SQA Star award ဟာ SQA ပညာရေးကို ပေးအပ်လျှက်ရှိသောစင်တာ၏ အောင်မြင်မှုကို အသိအမှတ်ပြုသည့် ဂုဏ်ပြုဆုတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
SQA အနေဖြင့် 2014 ခုနှစ် တွင် နိုင်ငံတကာရှိ Pre-HND နှင့် HND ဒီပလိုမာ သင်တန်းအား ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးလျက် ရှိသော သင်တန်းကျောင်း အဖွဲ့အစည်းများ ထဲမှ ကျောင်းသား ၊ ကျောင်းသူ များ ၏ အရည်အသွေးများနှင့် စွမ်းရည်ကို လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်အောင် အကောင်းဆုံး အထောက်အကူပေးသည့် သင်တန်းကျောင်းအား ရွေးချယ်၍ SQA International Star Award ကို ချီးမြှင့် ပေးခြင်းဖြစ်ပါ သည် ။
KMD Computer စင်တာ အနေဖြင့် 2014 ခုနှစ် တွင် သင်တန်းကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ တက်ရောက်မှု အများဆုံး ဖြစ်ခြင်း ၊ ထူးချွန်သော ကျောင်းသားကျောင်းသူများ စွာမွေးထုတ်ပေးနိုင်ခြင်း ၊ ကျောင်းသားကျောင်း သူများအတွက် ပိုမို အထောက်အကူပြုသော သင်ကြားရေး နည်းစနစ်များဖြင့် သင်ကြားပေးခြင်း နှင့် တက်ရောက်ရန် အဆင်ပြေသော အချိန်များကို ပြင်ဆင် စီစဉ်ထားခြင်း စသည့် အရည်အချင်းများကြောင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းနှင့်ကျောင်းများ ကို ကျော်ဖြတ်၍ SQA International Star Award ဆုကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ် ။
KMD Computer Centre မှ တန်းခွဲ အသစ်အဖြစ် Pre-HND and HND သင်တန်းများကို ထပ်မံဖွင့်လှစ်မည် ဖြစ်ပါတယ် ။ သင်တန်းနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက ဖုန်း KMD 01-700895 ၊ 502233 ၊ 09-254868920 သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ် ။
ပန်းဆိုးတန်း - ၃၈၁၀၃၅ / ၃၉၁၂၈၆ တာမွေ(၁)(၂) - ၅၄၁၃၂၈ / ၅၄၆၆၀၀
မြေနီကုန်း - ၅၃၄၁၇၀ / ၅၀၂၂၃၃ သိမ်ကြီးဈေး - ၃၈၄၂၆၈ / ၃၈၄၆၄၁
လှည်းတန်း (၁) (၂) - ၅၂၄၄၀၀ / ၅၀၂၂၁၁ ကမ္ဘာအေး - ၆၆၀၈၈၇
HOTLINE 09 253969200 သို့လဲ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။